Author - Shwe News
လက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အင်အားအကြီးဆုံးစစ်တပ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နိုင်ငံ ( ၁၀ ) နိုင်ငံ
သူမ ကို စိတ်ဆိုး တဲ့အသံ နဲ့ မပြော ဖို့ မိခင် ကို ပြန်လမ်းညွှန်လိုက်တဲ့ ထိပ်ထားသခင်လေးရဲ့ အသည်းယားစရာ ဗီဒီယို
သားသမီးတွေမှာလည်း မရရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာအမွေကို မြေးလေးကို ပေးခွင့်ရလို့ စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့ ချိုပြုံး !!
ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူနေတဲ့ ဧရာဝတီလူမင်းလေးကို သွားရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်သင်းကြည် !!
နိုင်နိုင်၊ ရှုံးရှုံး လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံဘွဲ့ကို စွန့်လွှတ်မယ်ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆန်
ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ၄၂ နာရီအတွင်း သေစေနိုင်တဲ့ သဘာဝဖျာ်ရည် !!!!!
Mobile Legends ဂိမ်းမှာ မြင်ရတော့မယ့် မြန်မာကိုယ်စားပြုဟီးရိုး
ရဲများက သင့်အိမ် သင့်ဆိုင်မှာ ဝင်ရောက်ရှာဖွေစစ်စေးခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း...
ပထမဦးဆုံး ရတဲ့ …အနုပညာကြေးနဲ့ …မိခင်ကို ကန်တော့ခဲ့တဲ့…...